China CNC Vertical Machining Center orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Oturn
Ny foibe fanodinana OTURN dia vita amin'ny vatan'ny vy Mihanna kalitao tsara indrindra sy ny fanohanana ny taolan-tehezana feno, izay mifoka folo heny noho ny tariby vy tsotra. Ny fitifirana miaraka amin'ny taolan-tehezana ao anatiny ao amin'ny tranofiara dia misy fanoherana mahery vaika ary fanoherana mahery vaika. Ho fanampin'izay, ny habaka anatiny malalaka dia ahafahan'ny mpandraharaha manova mora foana ny fitaovana sy ny entana miasa. Miaraka amin'ny firafitry ny henjana avo lenta, mamorona dian-tongotra kely izy io, fa milina mandeha ho azy misy fetra avo lenta sy be bakteria.
Ou Teng dia mampiasa marika fanta-daza misy kofehy avo lenta sy haingam-pandeha mivantana. Ny teknolojia fizotrany dia toy ny bearings famokarana, miaraka amin'ny fahazoan-dàlana zero sy ny toetra rehetra manodidina. Ny solo-tsipika dia ambany ny fanjifana, avo lenta ary hafainganam-pandeha haingana, hatramin'ny 48 metatra isa-minitra.
Ny milina dia manana jiro fiasa mamirapiratra avo lenta, izay mora ho an'ny mpandraharaha ny mamaky sy mamoaka entam-barotra ary mandrefy. Ny jiro miasa dia misy fiasan'ny tsy misy vovoka, tsy tantera-drano ary porofo mipoaka.
Fitaovana fifanakalozana fitaovana haingana, tsotra, azo antoka ary maharitra dia manome fifanakalozana fitaovana malefaka sy azo antoka. Ny famolavolana fitaovana tsy manam-paharoa fifanakalozana fitaovana, ny fahaizana misafidy fitaovana amin'ny toerana rehetra, dia azon'ny fanaraha-maso rindrambaiko PLC haingana.
Y mandeha axis
Z axis dia
Halavirana avy amin'ny oron'ny spindle mankany amin'ny latabatra fiasana
Halavirana avy eo afovoan'ny spindle mankany amin'ny soritry ny tsanganana
Ny haben'ny latabatra
Enta-mavesatra be indrindra amin'ny toeram-piasana
Fanesorana puce spiral indroa
Fitaovana fanesorana fantsom-boaloboka avo roa heny, totohondry ao amin'ilay masinina fanesorana puce spiral amin'ny lafiny roa amin'ilay milina, dia afaka mandefa mora foana ireo poti-vy voahodina ho any ivelan'ny masinina haingana, mampihena ny fako amin'ny fotoana tsy fanodinana noho ny fanesorana ireo vy vy .
Ny milina rehetra dia mampiasa fandrefesana laser, fitsapana fanapahana, fitsapana maharitra maharitra ary fanaraha-maso henjana mifanaraka amin'ny fenitra VDI 3441, ka ny axis tsirairay dia manana famerenana tsara sy fametrahana toerana tsara, miantoka ny fahamarinan'ny masinina.
Ny fitaovana fandrefesana boribory Renishaw dia ampiasaina hanitsiana ny boribory sy ny marim-pototra geometrika an'ny milina, amin'izay hanamarinana sy hiantohana ny fahamendrehan'ny habaka telo-habe.
Ny famolavolana karazana ampela-tànana dia manome spindle na karazana fehikibo miisa 6000 / 4500rpm, ary ny fantsom-pandehan-tsofina fohy dia tohanan'ny fahombiazan'ny sandriny sy ny lohan'ny loha, ka afaka manatsara ny hamafin'ny spindle izy. Ny motera boribory dia afaka mampiseho ny taha ambony fanapahana vy. Miaraka amin'ny rafitra fanamafisana ny spindle, ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny fihenan-tsakafo dia azo ahena mba hanitatra ny ain'ny spindle.
Teo aloha: Gantry Type 5-axis Milling Machine
Manaraka: Flat Type Lathe